आज हरितालिका (तीज), पशुपतिमा ७ लाख वर्तालुले दर्शन गर्दै | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
आज हरितालिका (तीज), पशुपतिमा ७ लाख वर्तालुले दर्शन गर्दै
काठमाडौ, २७ भदौ । आज हरितालिका (तीज), भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने यो पर्वमा हिन्दुधर्मालम्बिहरुले महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउने गर्छन् ।
भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास अनुसार यो पर्व मनाउने गरिन्छ । तीजमा व्रत बस्नाले पुरुषले विधुर हुनु नपर्ने, नारीले अटल सौभाग्य र अविाहित केटा केटीले सम्पन्न वर वा वधु पाउने विश्वास गरिन्छ ।
सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन् । तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरित विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि उनले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरेको पौराणिक विश्वास छ ।
तीजको अवसरमा महिलाहरुले वर्षदिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई पोख्ने पर्वका रुपमा समेत उपयोग गर्ने गरेका छन् । तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाहरुले सार्वजनिक गर्दछन् ।
तीजमा व्रतालुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आज बिहान ३ बजे देखि नै पशुपपतिनाथको मन्दिर खुल्ला गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालका अनुसार हरितालिका तिजमा पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै तीन वटा लाईनमार्फत मन्दिरको दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक लाईनमार्फत दर्शनार्थीले बिहानको समयमा एक घण्टा र दिउसोको समयमा दुई घण्टाभित्र दर्शन गरिसक्नेछन् । यो वर्ष तीजमा ७ लाख दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको कोषले जनाएको छ ।
Newer Postकुन रोगीले व्रत नबस्ने ? व्रतालु बेहोश भए यसो गरौं ।
Older Postव्रतका बेला यौनसम्पर्क राख्नु कति उचित ?